को हुन् नेपालका अग्ला नायक ? - eKhojkhabar
को हुन् नेपालका अग्ला नायक ?
बिना देशराज श्रेष्ठ आफैँमा सफल बैंकरको रुपमा परिचित छिन् । उनी यस्ती भाग्यमानी आमा हुन्, जसको दुईवटै छोराले डेब्यु चलचित्रबाटै व्यापक चर्चा कमाउन सफल भए । उनको जेठो छोरा आयुष्मान देशराज जोशीले चलचित्र “चपली हाइट २” बाट गतिलै प्रशंसा बटुले । हिट नायिका प्रियंका कार्कीसँगको प्रेम सम्बन्धपछि आयुष्मानको चर्चा अझै बढेको छ ।
यस्तै, रबिनाका कान्छो छोरा आशिरमान देशराज जोशी पनि डेब्यु चलचित्र “ग्याङस्टार ब्लुज”का कारण अहिले चर्चामा छन् । चलचित्रको भन्दा पनि यी दुबै नायकको अभिनय कौशललाई दर्शकले प्रशंसा गरेको पाइन्छ । उनीहरुको आकर्षक व्यक्तित्वका कारण पनि चलचित्र क्षेत्रमा पाइला टेक्ने बित्तिकै हजारौँ फ्यान कमाउन सफल भएका छन् । अग्लो कदका यी दुबै दाजुभाई अभिनय र व्यक्तित्वका कारण चर्चामा आइरहँदा उनीहरुको उचाई पनि चर्चाको अर्को विषय बनेको छ ।
शारिरीक हिसाबले हेर्ने हो भने आयुष्मान नेपालका अग्ला नायक मानिने राजेश जति नै अग्ला छन् । उनको उचाई ६ फिट २ इन्च छ । उनका भाई आशिरमान उनी भन्दा पनि अग्ला छन् । आशिरमानको उचाई ६ फिट तीन इन्च रहेको छ । यस हिसाबले अध्ययन गर्ने हो आशिरमान नै नेपालको सबैभन्दा धेरै उचाई भएको नायक हुन सक्नेछन् ।